Global Voices teny Malagasy · 18 Janoary 2013
Tantara tamin'ny 18 Janoary 2013
Maherin'ny 80 Ireo Namoy Ny Ainy Tao Amin'ny Anjerimanontolon'i Aleppo Ao Syria
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana18 Janoary 2013
@SyriaCampaigns nisioka hoe: Eritrereto ity: Eo am-panaovana fanadinana ianao & mijery ora ka 15 minitra sisa. Tampoka teo nahare fipoahana ianao. Vita. #AleppoUniversity Nitiranga izany tamin'ny 15 Janoary 2013. Andro voalohany tamin'ny fanadinana raha namely ny faritry ny anjerimanontolon'i Aleppo ny ady ao Syria, olona 80 mahery no namoy ny ainy...
Tontolo Arabo: Al-Andalus: Firodanana sa Fahazoana Indray?
Isaky ny faharoan'ny volana Janoary, ankalazaina ao Grenada ao Espaina ny “El día de la Toma de Granada” (andro nakàna an'i Grenada). Tamin'izany andro izany tamin'ny taona 1492, nandao ny Emirà Grenada i Muhammad XII (Mpanjaka Boabdil). Nahazo ny saikanosy iberiana ny kalifà (fiandrianan'ny mpanjaka Islamo) Omayyady tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-valo, ary nampitsahatra ny...